I-Fish Eagle Farmstay, isilwane sakho sokuhlukana esinobungane - I-Airbnb
I-Fish Eagle Farmstay, isilwane sakho sokuhlukana esinobungane
Lena indawo ekahle yokuhlala yasepulazini yamaqembu amakhulu abathanda ngaphandle, ukudoba nokubukela izinyoni. Le ndlu enobungani bemvelo ayikho kugridi ngokuphelele futhi isebenzisa ilanga negesi ukuze ibe namandla. Engadini enkulu kanye notshani, kokubili izingane kanye nezinja zingagijima usuku lonke. Indawo yokucima umlilo kanye ne-braai kuzoba yizinto ezizogxilwa kuzo ngokuhlala kwakho nathi.
Le ndlu yasepulazini yangasese ayisebenzi nhlobo. Ilanga negesi ukuphela kwamandla, ngakho-ke sicela usebenzise amandla ngokuwonga.
Ipulazi lise-Vaaldam ngakho-ke linamakhilomitha ambalwa omgwaqo ongajatshulelwa noma ngabe wukuqwala izintaba, ukudoba, i-kayaking, amabhodi okugwedla noma ukudlala nje ukulanda nezinja, amanzi azohlinzeka ngezenzakalo ezingapheli. Jabulela ukuphuma nokushona kwelanga okuhle okuhlanyayo, futhi uthandane nesibhakabhaka sasebusuku esinezinkanyezi ngenkathi uhlezi eduze kwendawo yokucima umlilo emangalisayo.
Ukusebenzisana kwezivakashi kugcinwa kukuncane, ukungena nje njalo ukuze ubone ukuthi ingabe yonke into isagculiseka izihambeli zethu. Njengababungazi sizohlala sitholakala ezivakashini zethu